Igwefoto Galaxy S20 dị mma na mmelite ohuru | Gam akporosis
Kemgbe ebidoro ha na February nke afọ a, Samsung akwụsịbeghị ịchụ àjà Galaxy S20 dị iche iche ngwanrọ mmelite lekwasịrị anya na igwefoto gị, iji melite arụmọrụ ha.
Agbanyeghị na eserese foto nke ụdị ndị mebere ezinụlọ Samsung a kachasị n'etiti ndị kachasị mma n'ahịa, na mbụ, ha enwetaghị ụfọdụ atụmanya nke ndị kachasị achọ. Ọ bụ ya mere South Korea ji rara onwe ya nye na-arụ ọrụ iji meziwanye ihe ndị a, nke ọ rụzuru nke nta nke nta, na nke ọ na-enwetakwa ọzọ na ohere ọhụụ a maka mmelite ohuru nke weputara awa ole na ole gara aga maka ekwentị ndị a.
Mmelite ọhụrụ maka usoro Galaxy S20 na-abịa na nọmba ụlọ G98xxXXU2ATE6. Nke a doro anya na mmelite nke abụọ maka ngwaọrụ ndị a ma ọ dị naanị na mpaghara ebe enyereghị ngwugwu ngwa ngwa mbụ nke ọnwa maka Galaxy S20, S20 Plus, na S20 Ultra. Nke a kwesịrị ịgbasa na awa na ụbọchị ndị na-esonụ na ụwa, n'ihi ya, ị kwesịrị ịmụrụ anya.
Ọ bụ ezie na enweghị ndekọ mgbanwe ebipụtara, anyị enweghị aka na ozi na nkọwa gbasara akụkọ na atụmatụ niile nke OTA a na-enye. Otú ọ dị, na-agbakwunye ọtụtụ nkwalite igwefoto na-eme ka ogo foto dị elu n'abalị, dị ka akụkọ nke ndị ọrụ dị iche iche ndị nwetawororịị.
Mmelite ahụ na-agbakwunye ihe nchekwa nchekwa ọhụrụ na Galaxy S20., nke kwekọrọ na ọnwa May a. Ya mere, nzuzo na nche na nzuzo nke ndị a na-abawanye na ngwa ngwa a. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na mmelite izugbe dịkarị, njikarịcha usoro, yana obere ndozi ahụhụ nke na-abịakarị na mmelite, yabụ ahụmịhe onye ọrụ kwesịrị ịbawanye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mmelite kachasị ọhụrụ maka Galaxy S20 na-agbakwunye mmelite igwefoto ọhụrụ
Etu esi ebudata ozi niile na akaụntụ Facebook gị